‘साइँली’ पछि कालिप्रसादको अर्को गीत, कथा पनि वैदेशिक रोजगारीकै – Todays Nepal
‘साइँली’ पछि कालिप्रसादको अर्को गीत, कथा पनि वैदेशिक रोजगारीकै
By Todays Nepal | नेपाल आज	 Last updated Jan 5, 2018
हालसालै चर्चित ‘साइँली’ बोलको गीतका लेखक तथा संगीतकार कालिप्रसाद बास्कोटाको नयाँ गीत सार्वजनिक भएको छ। सरल शब्द, सरस धुन र सुहाउँदो गायकी छान्न सक्ने खुबी भएका कालिले साइँलीमा जस्तै ‘तिलहरी’ गीतमा पनि वैदेशिक रोजगारीकै कथा समातेका छन्।
साइँली गीतमा युवक विदेश जाने अघिल्लो रातदेखि विदेश गइसकेपछिको कथा समेटिएको थियो भने यसमा विदेश जाने पक्का भएपछि उड्नुअघिको तीन दिनको कथा भनिएको छ। साइँलीमाजस्तै यो गीतका लेखक र स‌ंगीत कालि नै हुन्।
उनी गीत लेख्छन्, धुन तयार पार्छन् र आफैं गाउँछन् पनि। ‘हिट’ मा पनि उनी कुनै विधामा तलमाथि पर्दैनन्। रेशम फिलिली, ठमेल बजार, नीर जैले रिसाउनीजस्ता हिट गीतमा उनको लेखकीय, संगीत र गायकी खुबी प्रस्तुत भइसकेको छ। संगीत मात्र दिएका हिट गीत त थुप्रै छन्। लेखेका र संगीत मात्र दिएका तर अरुले गाएर हिट भएका गीत पनि छन्। जस्तो- पछिल्लो उदाहरण हो साइँली। साइँलीमा जस्तै उनले गायनमा अरुलाई नै सुम्पेका छन्। मनिष ढकालको स्वर सुन्न पाइने यो गीत कालि र मनिषको दोस्रो सहकार्य हो। करिब दुई वर्षअघि ‘परदेशी नभन’ बोलको गीतमा कालिले मनिषका लागि शब्द र धुन तयार पारिदिएका थिए।
गीतमा कालिसँग सहकार्य गरेजस्तै मनिषले भिडियोमा भने निर्देशक निकेश खड्कासँग दोस्रो सहकार्य गरेका छन्। परदेशी नभनपछि उनीहरुको यो नयाँ सहकार्य हो। त्यतिबेला निकेशले निर्देशक निश्चल बस्नेतलाई अभिनय गराएका थिए भने तिलहरीमा रेशम फिलिली, लुट २, पलाँसजस्ता फिल्मबाट अभिनय कौशलता प्रस्तुत गरिसकेका कामेश्वर चौरसिया र रंगमञ्चबाट फिल्म अभिनयतिर मोडिँदै गरेकी लक्ष्मी बर्देवालाई जोडीको रुपमा प्रस्तुत गरेका छन्।
जस्तो सुकै घमण्डी केटीलाई पनि सजिलै पट्याउने सुत्रहरु.जानी राखौ
दुनियाँ लठ्ठ बनाउने दुर्गेश थापाको यो भिडियो !
छोरीलाई आएको बैशले शवहरि पौडेल तनावमा, जोगाउनै मुस्किल !
प्रताप दासको गीतमा सोनिका रोकायाको यस्तो अभिनय (भिडियोसहित)
काउली बुढीलाई कसले दियो औठी तोलाको !